Leo ee Zodiac qadiimiga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Luulyo 24 iyo Ogosto 23 waxaad tahay Leo, Laatiin libaax. Akhrinta horoscope casrigan casriga ah ee zodiac-kii hore, waxaad raacdaa talada horoscope ee Leo si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, caafimaad, oo aad aragtid shakhsiyaddaada u hesho.
Laakiin sidee bay dadkii hore u akhriyi jireen Leo? Maxay uga dhigan tahay iyaga?
Falaagadii kooxda Leo
Halkan waxaa ah sawirka kooxda xiddigaha ee Leo. Wax libaax u eg ma ku arki kartaa xiddigaha?
Sawirka kooxda xiddigaha Leo Ma arki kartaa libaax?
Xitaa haddii aan ku xirno xiddigaha Leo oo leh xariiqyo, weli way adag tahay in la arko ‘libaax.
Leo Constellation oo leh xiddigo lagu soo daray khadadka laguna magacaabay
Halkan waxaa ah boodhka National Juqraafiga ee zodiac, oo muujinaya Leo oo ku yaal Waqooyiga Hemisphere.
Shaxda xiddigaha National Geographic oo Leo ku wareegsan
Sidee bay dadku markii hore Libaax ka keeneen? Laakiin Leo wuxuu dib ugu noqdaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha.
Sida dhammaan xiddigaha kale ee zodiac, sawirka Leo kama muuqanayo kooxda laftiisa. Ma aha mid ku dhalanaysa kooxda xiddigaha. Balse, fikradda oo waxaa hor yimid dabaqalloonkii wax arka. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqonaysa.
Maxay ula jeedeen dadkii hore?
Leo ee Zodiac
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada xiddigiska ee caanka ah ee Leo.
Leo ee Xiddigaha
Leo wuxuu diyaar u yahay inuu kufsado
Tixgeli zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar oo Leo ku wareegsan yahay casaan.
Leo ee Zodiac Dendera qadiimiga ah ee Masar
Leo ee Sheekada Qadiimiga ah
Waxaan ku aragnay Virgo in Qur’aanka iyo Baybalka/Kitaabku sheegayo in Eebbe sameeyey xiddigaha. Wuxuu siiyey hanuun ka hor waxyiga qoran. Aadam iyo wiilashiisii ​​waxay bareen ubadkooda si ay ugu baraan dhagartiisa.
Leo ayaa sheekada ku soo gunaanaday. Markaa xitaa haddii aadan ahayn ‘Leo’ dareenka horoscope-ka casriga ah, sheekadii xiddigiska ee hore ee Leo ayaa mudan in la ogaado.
Macnaha asalka ah ee Leo
In Tawrat, Hazrat Yacquub (Yacquub) wuxuu ku sheegay wax sii sheegidda qabiilka Yahuudah
Yahuudah waa libaax dhashiis.
Bilowgii 49: 9-10
Yacquubna wuxuu yidhi, Waxaa iman doona taliye, kaasoo loo ekaysiinayo sidii libaax oo kale. Xukunkiisa waxaa ku jiri doona ‘ quruumaha’ wuxuuna ka iman doonaa qabiilka Yahuudah ee Israa’iil. Isa al Masih wuxuu ka yimid qabiilka Yahuudah wuxuuna ahaa masiix ku subkay. Laakiin imaatinkaas ma uu qaadin ushii taliyaha. Waxa uu taas u badbaadinayaa imaatinka soo socda marka uu u iman doono sidii libaax oo uu u taliyo. Tani waa waxa Leo sawiray wakhtiyadii hore.
Iyaga oo eegaya tan imanaysa, qoraalladu waxay ku tilmaamayaan libaaxa inuu yahay kan keliya ee u qalma inuu furo kitaabka xurmada leh.
Oo anna kii carshiga ku fadhiyey gacantiisa midigta waxaan ku arkay kitaab wax kaga qoran yihiin dul iyo hoosba, oo waxaa ku shaabadaysnaa toddoba shaabadood. 2 Oo waxaan arkay malaa’ig xoog weyn oo ku naadinaysa cod weyn, oo leh, Bal yaa istaahila inuu kitaabka kala bixiyo oo uu furo shaabadihiisa? 3 Oo samada, iyo dhulka dushiisa, iyo dhulka hoostiisa laguma arag mid awooda inuu kitaabka kala bixiyo ama eego. 4 Oo markaasaan aad u ooyay, maxaa yeelay, lama helin mid istaahila inuu kitaabka kala bixiyo ama eego. 5 Markaasaa odayaashii midkood wuxuu igu yidhi, Ha ooyin, bal eeg, Libaaxa qabiilka reer Yahuudah ka mid ah oo ah xididkii ka yimid Daa’uud ayaa wuxuu ku guulaystay inuu furo kitaabka iyo toddobadiisa shaabadoodba.
Muujintii 5: 1-5
Libaaxu wuxuu ka guulaystey cadawgiisa imaatinka ugu horeeya, sidaas darteed hadda wuxuu awoodaa inuu furo shaabado keenaya dhamaadka. Waxaan tan ku aragnaa Zodiac-kii hore anagoo ku xusay Leo cadowgiisa Hydra Maska.
Libaax Leo oo ku tumanaya abeesada Dendera hore
Leo oo ku dul boodaya Hydra ee rinjiyeynta Medieval
Sawirka Xiddigaha. Leo wuxuu doonayaa inuu qabto madaxa Maska
Gabagabada Sheekada Zodiac
Ujeedada halgankii libaaxu kula jiray Abeesada ma ahayn uun in isaga laga adkaado, balse waa in la xukumo. Qoraaladu waxay ku sawiran yihiin xukunka Libaaxa erayadan.
Oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub; waayo, samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen; oo baddiina mar dambe ma ay jirin. 2 Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay. 3 Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; 4 oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen. 5 Markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi, Bal eeg, wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa. Oo wuxuu igu yidhi, Qor, waayo, erayadanu waa aamin iyo run. 6 Oo wuxuu igu yidhi, Iyagu way ahaadeen. Anigu waxaan ahay Alfa iyo Oomeega, iyo bilowgii iyo dhammaadka. Oo kii harraadsan waxaan hadiyad ahaan uga waraabin doonaa isha biyaha nolosha. 7 Oo kii guulaystaa wuxuu dhaxli doonaa waxyaalahan, oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa Ilaah, isna wuxuu ii ahaan doonaa wiil.
Muujintii 21: 1-7
Muujintii 21: 22-27
Aragtidan waxaan ku aragnaa dhammaystirka iyo dhammaystirka Zodiac. Waxaan aragnaa aroosadda iyo ninkeeda; Ilaah iyo carruurtiisa – sawirka laba-geesoodka ah ee ku jira Gemini. Waxaan aragnaa webiga biyaha – ballanqaaday gudaha Aquarius. Nidaamkii hore ee dhimashada – oo lagu sawiray kooxihii ku wareegsanaa Pisces – hadda ma jiro. Wanku halkaas buu deggan yahay – oo lagu sawiray Aries, iyo dadka la soo sara kiciyey – lagu sawiray Kansarka Isaga la noolow. Miisaanka Libra hadda dheeli tir maadaama ‘wax nijaas ah ma geli doono’. Waxaan aragnaa boqorrada quruumaha oo dhan halkaas sidoo kale, oo ku xukuma xukunka Rabbiga Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada, Masih ah – oo ka bilaabmaya sida iniinaha Virgo, iyo dhamaadka shaaca ka qaaday sida Libaaxa.
La haystayaasha Sheekada Zodiac
Su’aal ayaa taagan. Muxuu Libaaxu bilowgiiba si fudud u baabi’in waayay Shaydaanka Maska? Waa maxay sababta loo maro dhammaan cutubyada Zodiac? Markuu Isa al Masih ka horyimid cadawgiisii Scorpio Saacaddaas ayuu ku calaamadiyay
Yooxanaa 12: 31
Aduunyadan amiirkii shaydaanku waxa uu naga dhigan jiray gaashaanka dadka. Marka ay la kulmaan xoog ciidan oo xoog leh argagixisadu waxay inta badan gadaashaan dadka rayidka ah. Tani waxay booliska ku abuurtaa laba daran mid dooro oo ah inay laayaan shacabka inta ay argagixisada ka saarayaan. Markii Shaydaanku ku guulaystey inuu jirrabo Aadam iyo Xaawo wuxuu naftiisa u abuuray gaashaan bini-aadmi ah. Shaydaanku waxa uu ogaa in Abuuhu xaq yahay oo haddii uu dembi ciqaabo markaas, si uu xaq ugu yeesho xukunkiisa, waa in uu xukumo. oo dhan dembi. Hadduu Eebbe halaagay Shaydaan, markaas Shaydaan (oo macnaheedu yahay Eedaha) si fudud ayay noogu dacwayn karaan xumaanteenna, isaga oo u baahan in aynu xukunno isaga.
Si aan si kale u eegno, caasinnimadayadu waxay noo keentay xukunkii Shaydaanka. Haddii Alle isaga baabi’iyo markaas waa inuu ina baabi’iyo sidoo kale sababtoo ah waxaa nala qabsaday caasinimada Shaydaanka.
Baahida samatabbixinta ka hor xukunka
Markaa waxaan u baahneen in laga samata bixiyo dalabaadka Shaydaanka ee ah in xukun kasta oo isaga lagu xukumo ay iyaduna nagu soo degto. Waxaan u baahnay madax furasho dembigeenna ah. Injiilku wuxuu u sharaxay sidatan:
Idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinna iyo dembiyadiinna, 2 kuwaas oo aad markii hore ugu socon jirteen sida socodka wakhtigan iyo sida madaxda xoogga hawada oo ah ruuxa haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada. 3 Iyaga dhexdooda mar baynu dhammaanteen ku dhaqmi jirnay damacyada jidhkeenna, innagoo samaynayna waxyaalaha jidhka iyo maanku ay doonayaan, oo innaguna xagga dabiicadda waxaynu ka ahayn carruurtii cadhada sida dadka kale.
Efesos 2: 1-3
Madax furashadayada hadda waa la bixiyay
In uu allabari u sawiran in Capricorn Isa al Masih ayaa cadhadaas naftiisii ​​qaaday. Wuxu bixiyay madax furasha si aanu u bixi karno.
4 Laakiinse Ilaaha naxariista hodanka ka ahu wuxuu inagu jeclaaday jacaylkiisa weyn, 5 oo sidaas daraaddeed markii aynu xadgudubyadeenna ku dhimannay wuxuu inala soo noolaysiiyey Masiix. Idinku nimco baad ku badbaaddeen. 6 Oo innagana isagii buu inala soo sara kiciyey, oo wuxuu isagii inala fadhiisiyey meelaha jannada xagga Ciise Masiix, 7 si uu wakhtiyada imanaya hodantinimada weyn oo nimcadiisa ugu muujiyo roonaanta uu inoogu qabo xagga Ciise Masiix. 8 Waayo, idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaysadka, mana aha wax xaggiinna ka yimid, 9 laakiinse waa hadiyadda Ilaah, mana aha xagga shuqullada, si aan ninna ugu faanin. 10 Waayo, innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey, oo waxaa laynoogu uumay Ciise Masiix shuqullada wanaagsan aawadood oo Ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno.
Eebbana waligii dadka uguma talo gelin in lagu xukumo naarta. Wuxuu u diyaariyay Shaydaan. Haddiise uu Ibliis (Ibliis) ku xukumo caasinimadiisa waa inuu sidaas oo kale u sameeyaa kuwa aan la soo furan.
Matayos 25: 41
Dariiqayada Loo Baxsado Hadda La Sameeyey
Tani waa sababta Isa al Masih uu ku gaadhay guul weyn oo iskutallaabta ah. Wuxuu naga xoreeyay xaqa sharci ee Shaydaanku inagu lahaa. Hadda wuu ku dhufan karaa Shaydaanka isaga oo aan sidoo kale nagu dilin. Laakiin waa in aan doorannaa in aan ka baxsanno xukunka Shaydaanka. Leo wuxuu hadda ka celinayaa inuu ku dhufto maskii si ay dadku uga baxsadaan xukunkaas.
2 Butros 3: 9
Tani waa sababta aan maanta u aragno in aan weli sugayno shaqo joojinta ugu dambeysa ee Shaydaanka, oo lagu sawiray Sagittarius, oo wali la sugayo Xukunka ugu dambeeya, ee ku sawiran Taurus. Laakiin qoraaladu waa naga digayaan.
10 Laakiinse maalinta Rabbigu waxay u iman doontaa sida tuug oo kale; maalintaas oo ay samooyinku baabbi’i doonaan iyagoo sanqadh weynu ka yeedhayso, oo waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay baabbi’i doonaan. Dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa.
2 Butros 3:10
Horoscope-ka Leo ee Qoraaladii Hore
Horoscope waxay ka timid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo macnaheedu yahay calaamadaynta (skopus) saacadaha ama waqtiyada gaarka ah. Qoraalladu waxay calaamadeeyaan saacadda Leo (horo) sida soo socota.
Rooma 13: 11
Tani waxay caddaynaysaa inaan la mid nahay dad hurda dhismo gubanaya. Waxaan u baahanahay inaan toosno! Tani waa saacaddii (horo) la toosin lahaa sababtoo ah Leo ayaa soo socda. Libaaxa ciyaya ayaa wax ku dhufan doona oo baabbi’in doona Shaydaanka iyo dhammaan weli xukunkiisa sharciga ah.
Akhriska Horoscope-kaaga Leo
Waxaad u adeegsan kartaa akhriska Horoscope Leo habkan
Leo wuxuu kuu sheegayaa in haa, ay jiraan kuwa wax quudhsada, oo ku jees jeesa oo raacaya rabitaankooda xun. Waxay yidhaahdaan, Xaggee buu ka ballanqaaday imaatinka? Tan iyo markii awowayaashayo dhinteen, wax walba waxay u socdeen sidii ay ahaan jireen tan iyo bilowgii abuurniinta. Laakiin waxay si badheedh ah u illoobaan in Eebbe leeyahay oo uu xukumi doono, dabadeedna wax kasta oo dunidan ku yaallaa la dumin doono.
Hadday wax walba saas u baabbi’i doonaan, qof caynkee ah ayaad tahay? Waa inaad ku noolaataan nolol quduus ah oo cibaado leh markaad rajaynaysaan maalinta Ilaah oo aad degdegaysaan imaatinkeeda. Oo maalintaas ayaa samooyinka dab lagu baabbi’in doonaa, oo waxyaalaha abuurkuna waxay ku dhalaali doonaan kulaylka. Laakiin sida aad ballankiisa u yeelaysaan waxaad u baahan tihiin inaad sugtaan samo cusub iyo dhul cusub oo xaqnimadu deggan tahay.
Haddaba idinkoo waxan rajaynaya, ku dadaala in laydinku ceeboobo idinkoo ceeb ah oo aan ceeb lahayn. Maskaxda ku hay in samirka Rabbigeen uu yahay badbaado adiga iyo inta kugu xeeranba. Mar haddii hore laguugu digay, iska jir, yaanay qaladka xumaanta ku kaxayn oo aad uga dhicin meesha aad ammaantay.
Sheekadii Zodiac-kii hore waxay ku bilaabatay Virgo. Si aad u qoto dheer u gasho Leo eeg
Ka baxso xukunka ka hor Nuux
Ka baxso xukunka ka hor Luud
Maasigii shaydaanku imtixaanay
Fahamka & helitaanka hibada Nolosha